Tsiaro ny 13 mey 72: tena nadio ny tolona natao | NewsMada
Tsiaro ny 13 mey 72: tena nadio ny tolona natao
“Tsy marina ny hoe i Etazonia no nanome vola anay. Ny tsipaipaika teo amin’ny kianjan’ny 13 mey ny vola mba azonay, tamin’ny fitifirana sy ny famonoana ireo mpianatra ireo. Tamin’ny sobika ny vola tamin’izay.”
Io ny nambaran’ny mpitarika ny hetsiky ny mpianatra 1972, ny Me Razafinjatovo Willy, teny amin’ny kianjan’ny 13 mey, anoloan’ny lapan’ny Tanàna, Analakely, omaly, taorian’ny fametrahana fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana ireo mpianatra maty tamin’izany. Tafa tamin’ny mpanao gazety io fa tsy nisy kabary.
Noforonina ny vola tamin’izany. Satria tsy nisy olona na mpianatra niomana avy any an-tranony hoe andeha ho eny amin’ny kianjan’ny 13 mey tamin’ny 1972, hahazo voninahitra na volabe. Nitolona sy niady ho amin’ny fampianarana no nahafaty ireo mpianatra.
Noho izany, tsy tokony hifangaro amin’ny tolona rehetra ny resaka vola sy ny voninahitra sy ny toerana. “Satria tsy nieritreritra hitondra fanjakana akory izahay tamin’izany”, hoy izy. Izay ny maha samy hafa azy satria tena nadio ny saina aman’eritreritra.
Nisy fametrahana takela-bato teny an-toerana hoe 13 mey 1972, tamin’ny 2002. Nefa nesorina izany taty aoriana. Afo tsy mety maty ireny… Satria nametraka an’io 13 mey 1972 io, na iza na iza nitolona taty aoriana.
“Mahatsiaro ny mpitolona izahay androany, mbola manantena sy matoky ary mino fa ho avy ny Fahafahana notakina tamin’izany. Mitohy ny tolona. Izay notohizan’ny teo aloha, tohizanay koa ankehitriny”, hoy kosa ny avy amin’ny Rodoben’ny Malagasy tia tanindrazana ho amin’ny fanorenana ifotony (RMTF), ny pasitera Tsarahame Edouard.
Mbola tsy avotra i Madagasikara. Mbola feno fanjanahana eto amin ity firenena ity, itenenana mandraka ankehitriny hoe mitohy ny tolona nataon’ireo zoky raiamandreny hatramin’izao.
“Mazava fa tolona ho an’ny fahafahana ho an’ity firenentsika ity ny tolona ataonay izay tao anatin’ny fanjanahana”, hoy izy. Tolona ho an’ny demokrasia, tolona ho an’ny fampihavanam-pirenena, tolona ho an’ny fampandrosoana, tolona amin’ny ady amin’ny kolikoly… Tsy maintsy miady amin’izany isika mba hahavotra ity firenena ity ho tan-dalàna.